Mey 1, 2013 amin'ny 11:42 aho
izany no tsy ara-drariny. Ianao dia antony tonga tany WordPress. Tena diso fanantenana aho amin'ny WordPress Moderators. Ianao mendrika kokoa kely iray fotsiny rohy.
Mey 1, 2013 amin'ny 3:48 am
Tsara, Manantena aho fa afaka hitandrina izany nihazakazaka.
Angamba ianao dia afaka manomboka ny fampielezan-kevitra mba hilaza WordPress izahay rehetra tsy faly. Nanomboka nampiasa WP indrindra indrindra noho ny plugin iray.. izany tombony goavana ho an'ny SEO & rohy ao amin'ny Google. Aho efa ho Mpitantana Tranonkala ho an'ny 17 yrs Ary tsara ny mahazo ahy mba hampitsahatra ny fampiasana Dreamweaver & mifamadika amin'ny WP.. izany dia noho ny Transposh. 🙂
Mey 1, 2013 amin'ny 5:43 am
Misaotra noho ny tsara fanahy teny, dia afaka maka izany ho any amin'ny WordPress sehatra fiadian-kevitra, ary aoka ny Moderators mahalala, fa tsy mino izany dia hanampy be.
Heveriko fa ny tsy vahaolana WordPress dia miakatra haingana be ankehitriny.
Mey 1, 2013 amin'ny 5:34 am
Wow Be Izy Izany mampalahelo, aiza no mitaraina??
Mey 3, 2013 amin'ny 8:27 am
Mety hitaraina amin'ny WordPress sehatra fifanakalozan-dresaka, fa tsy mihevitra na iza na iza no hihaino.
Mey 1, 2013 amin'ny 10:48 am
Tsara tokoa izany vaovao ratsy. Tsy mieritreritra ny WordPress ekipa tsaboina plugin mpandraharaha tahaka izao. Mila handinika indray ny asa. Tahaka anao nanao hoe:, ny rohy azo esorina sy izay azo natao nandritra ny fotoana ela izao. Inona no olana? Ny hevitra dia be noho manan-kery ary efa nampiasa ny plugin amin'ny be dia be ny toerana, izay efa nitondra ahy ho be dia be ny fifamoivoizana fanampiny ary koa ny dian-tongotra nampitombo ny toerana ao amin'ny Google. I aoriana ianareo ry zalahy amin'ity tany ity.
Child Themer milaza
Mey 2, 2013 amin'ny 9:09 am
Tsara fa koditra fotsiny. Tsy mahazo izay ny tena olana dia. Faly aho ianao mbola manolotra ny plug ao araka ny mampiasa azy amin'ny vitsivitsy vohikala.
Francois Lachance milaza
Mey 3, 2013 amin'ny 3:16 aho
WordPress dia mahatahotra,ny hany zavatra tsara ho WordPress dia ny fiaraha-monina ny developer toa anao ny lehilahy,izay nanao ezaka be dia be ho an'ny tsy manam-bola, ary tena kely recognition.You lehilahy nanao asa mampitolagaga plugin izany ary manantena aho fa hanohy hanao izany na dia that.Best ny vintana
Mey 3, 2013 amin'ny 3:34 am
Mitovy hevitra amin'i Francois. WordPress dia mahatahotra tsy misy mpandraharaha tahaka anao.
Mey 4, 2013 amin'ny 2:01 am
Mino aho fa io fitsipika WordPress ho an'ny hisorohana ny Google vorondrano penality ary afa-tsy ity toerana avy amin'ny sazy.
Mey 4, 2013 amin'ny 2:20 am
An mahaliana hevitra, fa zavatra isika dia tena afaka hiatrika Google tsy wordpress.org patronization, ary ihany koa – dia mahazo alalana manana rohy eo amin'ny Widgets, manontany Facebook, amin'ny twitter, ShareThis(haingana pejy ny laharana 10), sy ny maro hafa
Ana Kelly milaza
Mey 5, 2013 amin'ny 9:44 am
Dia miala tsiny aho ny hihaino aho no mampiasa ny plugin for taona maro tsy ary tiako ilay izy….
Manantena aho fa ianao no fihazonana izany.
Mey 6, 2013 amin'ny 12:42 am
Tiako ny milaza aminareo fa tanteraka aho manohana ny fanapahan-kevitra 🙂
Aza mitsahatra hanozongozona, NW dudes 😉
Mey 8, 2013 amin'ny 2:43 aho
Fa ny firaketana an-tsoratra, tanteraka tsara ianao avela manana ny rohy ao an-Widget. Ny lalàna momba WordPress.org ihany no milaza fa ny rohy dia tsy maintsy ho hifidy-in rohy, tsy hifidy-avy iray.
Tsisy fisaorana ny manana ny plugin amin'ny WordPress.org rehefa manapa-kevitra fa te-hitoetra amin'ny alalan'ny izany fitsipika manokana.
Mey 8, 2013 amin'ny 11:35 am
Izaho no OK ny toe-javatra tahaka ny ankehitriny. Izaho dia ampiasaina mba manana “pireharehana Powered by WordPress” ao amin'ny ny pejy, izay tsy nahy avy amin'ny foto-kevitra no efa nametraka (ary mihevitra aho fa ny toerana misy anao lohahevitra izany koa no, Tsy misafidy-in). Izany no intsony ny raharaha, satria be aho tsy mirehareha ny amin'izany.
Raha ity fitsipika ity ho reconsidered (dia afaka mamaky fanehoan-kevitra vitsivitsy eto mpampiasa, ny miandry izany, ho OK amin'izany, singling avy, etc.) Dia handinika.
Izaho koa dia mino fa fanakatonana mafy ny plugin amin'ny zavatra izay efa any ho 4 taona, izay tsy misy fiarovana gaping lavaka no diso asa. Afa-tsy iray volana lasa izay aho somary ivelan'ny aterineto, ary mety tsy afaka ny handamina izany ho solon'ny tsara raha. Aho milaza fa maka ny fotoana mba handinika hoe politika (manome ny filazana, antonony sasany timeframe, na inona na inona). Izany no tsy toy izany fanakianana olana, izay mitaky ny fampiasana ny hery toy izany.
Na izany aza, Misaotra noho ny fahavononanao, ary ny fotoana, Manantena isika Ho hihaona amin'ny ho avy amin'ny teny tsara kokoa.
Mr maitso milaza
Mey 8, 2013 amin'ny 12:50 am
(Tsisy fisaorana ny manana ny plugin amin'ny WordPress.org rehefa manapa-kevitra fa te-hitoetra amin'ny alalan'ny izany fitsipika manokana.)
isaorana Otto mba ho any sy hanazava
Ofer ny vaovao tsara isika tia ny(ny) plugin
Transposh dia tsy maintsy ho velona
Wolfgang Bloomfield milaza
Mey 8, 2013 amin'ny 10:20 am
Salama, Aho te-hilaza fotsiny misaotra betsaka noho ny Transposh plugin, tena tsara izany fitaovana, Izaho no alaina izany avy amin'ny toerana, ary am-pireharehana aho maneho ny rohy.
Tsy azoko hoe nahoana ianao no nifidy ny, Plugins maro manana rohy ny toerana avy amin'izy ireo, tsy misy na inona na inona Diso eo Amin'io tahaka ny plugin malalaka, toy izany ianao, fara fahakeliny, tokony hahazo rohy avy izany.
Niels Jacob milaza
Mey 9, 2013 amin'ny 10:56 aho
Misaotra noho ny asa – Tena mankafy ny plugin, ary manantena aho dia hiverina amin'ny WordPress ela. Nandritra izay fotoana izay, Inona no vaovao farany ho voky dikan-? (Mila Widgets hafa noho ny toerana misy anao) Tokony ho uninstall ny WP plugin, ary maka + mametraka plugin avy amin'ny Download fizarana? Na dia ny hamafa ny rehetra amin'izao fotoana izao teny?
Mey 9, 2013 amin'ny 1:05 am
Izany tsy hamono ny teny, ny fomba soso-kevitra dia miasa. Misy fomba hafa koa aza
1. Hanatsarana amin'ny wordpress.org ny dikan- 0.9.3
2. Mandehana any amin'ny toe-javatra sy ny maso “hanatsarana ho voky dikan-”
3. Jereo ny upgrades indray (dia mety tsy maintsy hanery izany)
4. Hanatsarana ho voky dikan- (amin'izao fotoana izao 0.9.3.1)
Mey 9, 2013 amin'ny 2:23 am
Misaotra anao indrindra – I nampiasa ny soso-kevitra farany, Ary nanao be!
Mey 9, 2013 amin'ny 2:45 am
I nahy upgraded ho 0.9.3 avy amin'ny WordPress repository, nefa ankehitriny tsy ampy saina. Koa uninstalled ary alaina avy amin'ny toerana dikan. Plugin dia tsy nametraka, tsy manan-kery voalaza plugin hita. Izao aho ampy fitaovana ny fandikan-teny avy amin'ny toerana.
Mey 9, 2013 amin'ny 3:18 am
Dia jereo ity, na izany aza, Vakio ny fanehoan-kevitra hafa momba ny fomba hanatsarana avy amin'ny repository.
Mey 9, 2013 amin'ny 3:29 am
Hi, Misaotra noho ny valin-. Rehefa niverina teny amin'ny ny Download pejy hitako ny 0.9.3.1 Rohy. Tsy maintsy hamafa ny antontan-taratasy avy amin'ny 0.9.3 ary avy eo dia mametraka 0.9.3.1. Izany dia miasa tsara ankehitriny, amin'ny saina indray. Misaotra anao indrindra, ary Miala tsiny aho noho ny zava-misy miaraka amin'ny WordPress.
'Ny tranonkala mamelatra ny Tenin'Andriamanitra manerana izao tontolo izao, Ary tiako ho fantatrareo fa ny fandikan-teny manontolo maotera dia ny fanahy ho voavonjy.
Mey 13, 2013 amin'ny 5:21 am
WordPress tsy afaka ny ho iray fiteny maro CMS tsy Transposh! misy fandikan-teny maro Plugins for wordpress fa izy rehetra dia tsy misy ilàna azy 😀 tena faly aho noho ny fampiasana Transposh sy ny fanampiana ho an'ny fanohanana amin'ny teny persana. 🙂
Mey 18, 2013 amin'ny 11:38 am
Hey Ofer, ny fantatrareo izay 🙂
Fotsiny mba handefa anareo, fantatrareo fa ny olana dia raikitra rehefa raikitra reuploaded ny dikan no hitafy ny lohamilina tamin'izany fotoana, Tsy azo antoka ny fomba sy ny antony, fa raikitra izany.
Izao hitako izay tiana holazaina amin'ny ny plugin rehefa niala WordPress, tena mampalahelo, Tena mihevitra roa tonta dia tokony handamina sy hihaona antsasaky ny fomba fahazoan-kevitra izany, ho an'ny rehetra ny noho.
Upgraded fotsiny aho ho any amin'ny farany dikan, Hatreto aloha dia mbola mety tsara, dia hanara-maso ny fifamoivoizana by MediaWiki sy manantena ny olana fanaony teo aloha resurface.
Misaotra anao mitandrina Transposh velona.
Mey 19, 2013 amin'ny 12:04 aho
Faly nandre ny olana dia lasa, maniry anao vintana amin'ny ho avy 🙂
Mey 27, 2013 amin'ny 9:18 aho
Misaotra betsaka noho ny Transposh plug-in. Ny WordPress fitsipika dia tsy rariny. Tanteraka aho amin'ny lafiny. Upgraded ho voky sy ny dikan-pireharehana haneho “translated by Transposh” Rohy.
Ny plug-in no tena mety ny mampiasa.
Jona 24, 2013 amin'ny 10:37 am
plugin no mbola miasa ao amin'ny fanaovan-gazety teny tranonkala izay efa nametraka ny plugin, dia mety afaka hanome ny Download rohy avy amin'ny une ofisialy repo…?!
Jona 24, 2013 amin'ny 10:40 am
Ny Download eo amin'ny WordPress repository mitondra eto, azonao atao ny manamarin ny Download feno dikan-, ary manao ny upgrade, tsy izany dia mety mitsidika ny Download pejy eto.
Jona 26, 2013 amin'ny 2:15 am
Downloading vaovao farany avy amin'ny http://svc.transposh.org/transposh.latest.zip…
Download tsy nahomby. Voarara
Jona 26, 2013 amin'ny 2:29 am
Misy zavatra eo amin'ny lohamilina no mety manakana izany, azafady miezaka downloading tanana ka tandremo tsara mba afaka miditra ny rakitra
Aogositra 15, 2013 amin'ny 7:59 am
Manaiky aho. WordPress Staffers, Araka ny efa nahatsapa, dia tena manao ny tena asa ratsy.
Dia hamafa ny Forum Namaly fotsiny satria te-ho ny 'Voalohany’ no mamaly na manapa-kevitra fa ny valin-teninao tsy vita (dia afaka manome anao 2 anarana, nefa aho tsy kokoa) ary te hanatitra ny karama manokana tolotra amin'ny mampifandray ny matihanina ny mombamomba (Eny ..). Izany no lafiny mainty ihany no WordPress, ary manantena hovana izany..
Dave Main milaza
Aogositra 20, 2013 amin'ny 2:28 am
Mahafantatra izay tianao lazaina momba tapaka Plugins mampiroborobo ny mpanohana ny dikan-. Tsara fanahy iray teny ho azy – mampalahelo.
Dia toerana tena ny toerana. Dia hitandrina ny maso. Fantastic Mpandika.
Rehefa ny mpandika ny sisa rehetra dia tsy 2 tsara indrindra.
Aogositra 20, 2013 amin'ny 10:34 am
Desambra 20, 2013 amin'ny 4:31 am
Ny habetsaky ny asa izay ianareo ry zalahy efa nataony ho amin'izany plug-in dia mahagaga.
Aho miasa ho tsy soa fitsaboana fikambanana ary tsy afaka milaza aminareo fa tena ny plug-in Nanampy anay mifandray amin'ny Raintsika Hispanic mponina.
Fotsiny hiditra sy manampy amin 'ny fandikan-teny dia mahafinaritra.
Bravo namako… izany fotsiny koa ny fomba ratsy WP nanao sarotra ho anao mba hampiroboroboana ny tenanao.
Izaho ho manolotra anao, azo antoka. Am-bava dia ny tsara indrindra indraindray fampiroboroboana.
Bogdan Storm milaza
Desambra 31, 2013 amin'ny 2:47 aho
Aza miala amin'io sehatra io sy hitandrina Transposh velona.
Raha te afaka miresaka momba ny fanaovana azy io mahasoa ary Izaho no hamonjy anao amin'ny hevitra momba ny.
Tsy mila WordPress tranonkala mba hampiroboroboana ny asa.
Tandremo ny fanantenana UP ary aoka isika hanampy anao.
Misaotra asa miavaka sy ny fanaovana ny plugin iray amin'ireo tsara indrindra hitako hatramin'ny … mandrakizay.
Janoary 15, 2014 amin'ny 6:45 am
Mba miangavy re!. aza mitsahatra!
Faly aho mandoa vola mba fanohanana eo amboniny.
Martsa 17, 2014 amin'ny 11:03 am
Hey, Tiako ny ny soso-kevitrao momba ny WP.org toerana izay misy ny plugin nahazo kintana iray ampy. Ny fitiavany noho ny zavatra ataonareo no hita taratra ao amin'ireo fanehoan-kevitra. Ny tapa-kazon'i izany @.
James Hilliard milaza
Jona 2, 2014 amin'ny 4:19 am
Ny Mods amin'ny WordPress tena tokony handinika indray izany travesty ny Fandresen-dahatra. Rehefa manondro avy… Isaky ny anjara ny bokotra dia rohy ny toerana hafa. Ny Facebook Plugins mamaritra ny toy izany… AHOANA sahy miezaka hampiray IZAO TONTOLO IZAO ivelan'ny Google fandikana EVERYPAGE!!!
Jolay 10, 2014 amin'ny 8:12 am
Ny renitantely, milaza
Febroary 6, 2015 amin'ny 4:28 am
Ry zalahy “mahafinaritra asa!” Tiako ny plugin ary tiako ny toe-tsaina noho ny mijoro hatramin'ny ny marina!
Wordpress tsy ho WordPress tsy misy plugin mahatahotra toy ny anao. Toy ny nilaza ianao Facebook, Mifandray amin'ny alalan'ny, Twitter, Google…izy rehetra mba mahazo rohy indray nahoana no tsy ianao?
Izaho dia 100% aoriana ianao, I haneho ny plugin ary haneho ny rohy! Bola mendrika ny homena aiza moa no tokony. Ampy tsara ianao mba hamela olona maro mampiasa ny plugin ary mendrika kely ho azy rehetra! Izany dia midika hoe dia nahatalanjona ahy fa ny olona amin'ny WordPress tsy afaka mankasitraka ny asa mafy izay miditra ao zavatra toy izao. Hianao no hieritreritra ny vahoaka rehetra, izy ireo hahatakatra fa ny ankamaroan'ny. Sady koa anie, WordPress no soa avy amin'ny asa, rehetra mpampiasa ny WordPress soa avy amin'ny asa, izany…Nahoana no tsy tokony? Dia pireharehana foana ny plugin amin'ny zanako-toerana indray ny rohy! Ary dia hilaza ny mpianatra rehetra mba hanao toy izany koa. Ianao no mendrika kokoa. Ho ela velona ny demokrasia!!!! 🙂
Febroary 22, 2015 amin'ny 7:29 am
Miombon-kevitra tanteraka rehetra lazainao, Ny renitantely,! Tiako ny toe-tsaina Transposh koa …ary tena tia io plugin mamiratra izay efa vao nametraka ary miasa tsara!
Btw, Transposh, Tsy nahita na aiza na aiza ny bokotra fanomezana paypal?? Mieritreritra aho fa ny iray ilainao 🙂 …ary misaotra betsaka fa tsara tarehy ity plugin!
na najeb milaza
Febroary 28, 2015 amin'ny 11:28 aho
thats tsy ara-drariny. plugin io no tsara indrindra ho ahy foana aho gnna mampiasa azy io ihany ry zalahy dont U mila WordPress, ary U marina dia tokony appreiate an'i Ora asa aminy sy hampitandrina U alohan'ny hanao izany, thats tena ratsy
Ethan Sanabria milaza
Jona 5, 2015 amin'ny 9:02 am
Tsara izany sucks. Tena toy izao plug-in! Ho an'ny orinasa iray mitady hanitatra any Amerika Latina, Transposh lasa tena ampahany manan-danja amin'ny drafitry. Faly aho handoavana izany!
Very mandiso fanantenana, WordPress!!!